निर्मलाका लागि न्याय माग्दा घाइते भएका व्यक्ति अस्पतालमा अलपत्र, अस्पताल- न औषधि न उपचार ! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
निर्मलाका लागि न्याय माग्दा घाइते भएका व्यक्ति अस्पतालमा अलपत्र, अस्पताल- न औषधि न उपचार ! (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’ को आज ३५१ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विषयमा रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
पाल्पा जिल्ला अस्पतालमा औषधि नै छैन !
पाल्पा । सरकारले नागरीकको सहज तथा कम खर्चमा स्वास्थ्य उपचारीका लागि भन्दै स्वास्थ्य बीमा लागू ग¥यो । सुरुमा बीमा रकम तिरेपछि एक बर्षसम्म सरकारले तोकेका अस्पतालहरुमा चरणबद्ध निशुल्क औषधि उपचारको सुविधा हुन्छ । तर पाल्पाका स्थानीयले भने स्वास्थ्य बीमा गरेर पनि पाल्ला स्थित जिल्ला अस्पतालमा न उपचार पाउँछ न औषधि नै । जस्ता पाताले काटेको बिरामी लिएर जिल्ला अस्पताल पुगेका बटला सामान्य चोटमा लागेको औषधि किन्न पनि बाहिर फार्मेसीमा कुद्नु प¥यो ।
क्षयरोग वा क्यान्सरः के हुँदै छ छानबिन ?
काठमाडौं । हामीले कार्यक्रमको यस अघिको श्रृङखलामा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा क्यान्सर देखिएर शल्यक्रिया गरेका बिरामीको पछि परीक्षण गर्दा क्षयरोग देखिएको बिषयमा रिपोर्टिङ गरेका थियाँै । सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाँउपालिकाका रामकुमार बानियाँको गालाको भागमा पहिलो २ वटा रिपोटमा क्यान्सर देखिएको छ भने शल्यक्रियापछि चेक गर्दा क्षयरोग देखिएको छ ।
सल्लाह सुझाव संकलनमै सक्यो १८ लाख, तर आयोगको प्रगति शून्य !
काठमाडौं । प्रदेश नम्वर २ मा प्रदेशको नाम र राजधानीको बिषयमा गठन भएका सुझाव आयोगले काम नै नगरी १८ लाख सकिएको छ । प्रदेश सभा गठन भएको लामो समयसम्म पनि प्रदेश नम्वर २ को नाम र राजधानी तोक्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले गत कात्तिक ११ गते पहिलो पटक ४५ दिनको म्यादसहित संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । यसका लागि ३० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।